Shiinaha Cananaaska Fabric Bag Bacda wasakhaysan Bacda Qurxinta Qurxinta Dabiiciga ah ee Unisex ee warshada Safarka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Changlin
Cananaaska Baakada Bacda Wasakhda wasakhda ah Bacda Qurxinta Qurxinta Dabiiciga ah ee Unisex ee Safarka
Maroodiga cananaaska, fiber-ka caleenta cananaaska, oo inta badan loo yaqaan faybar cananaaska, ayaa ah faybarka laga soo saaro caleemaha cananaaska, kana tirsan fiber-ka xididka, kaas oo lagu soo saari karo hababka kiimikada, cilmiga noolaha iyo farsamada. Fibreedka laga soo saaray habka farsamada ayaa ah mid tayo wanaagsan leh oo dabiici ah oo aan wasakh lahayn.
Dulmarka Wax soo saarka: JF20-22
Waxyaabaha: linenaska cananaaska Miisaanka: 76g
Cabir: L16 * W5 * H14cm Xiritaanka: jiinyeer
Goobta Asalka: GUA, CN Dekedda: ShenZhen 、 Guangzhou 、 HongKong
Faa'iidada: dabiici ah, dib loo cusboneysiin karo, waaraya, bey'ada ku habboon, wasakh la'aan
Maroodiga cananaaska, fiber-ka caleenta cananaaska, oo inta badan loo yaqaan faybar cananaaska, ayaa ah faybarka laga soo saaro caleemaha cananaaska, kana tirsan fiber xididka, kaas oo lagu soo saari karo hababka kiimikada, cilmiga noolaha iyo farsamada. Fibreedka laga soo saaray habka farsamada ayaa ah mid tayo wanaagsan leh oo dabiici ah oo aan wasakh lahayn. Waxaa la cadeeyay in hemp cananaaska ay kujirto walxaha bakteeriyada dabiiciga ah iyo bakteeriyada, oo si wax ku ool ah u dili kara bakteeriyada isla markaana xakameyn karta koritaanka fangaska iyo noolaha. Waa nooc ka mid ah dharka dharka daryeelka caafimaad ee dabiiciga ah oo aad u fiican oo leh qaab-dhismeed khafiif ah oo khafiif ah oo ku dhex jira qaab dhismeedka fiber-ka iyo awood wanaagsan oo uu ku nuugo oo uumi baxo biyaha si dhakhso leh.
Fiberka cananaaska waa wax dabiici ah, oo waari kara, lagana helay arxan daro, waxaa laga sameeyaa caleemaha qashinka ee geed cananaaska. Caleemahaani waa wax soo saar ka soo baxa goosashada cananaaska jira, sidaa darteed alaabta ceyriinka ah uma baahna ilo deegaan oo dheeri ah oo la soo saaro.
Fiberka caleenta cananaaska, oo iska leh fiilooyinka caleenta cagaaran, ayaa ah fiber ka soo baxa caleemaha cananaaska. Waxaa lagu qasi karaa fiilooyinka dabiiciga ah ama fiilooyinka la isku daro. Daabacaad fudud iyo dheeh, neefsasho, fudeyd la'aan fudud, raaxo leh, bey'adeed.
wax dabiici ah, taabasho jilicsan oo jilicsan
Hore: Eco-friendly Linen Cotton Bag Cosmetic Pouch Travel Istaag Iibinta Bacda Label Gaarka ah Label Gaarka ah
Xiga: Maqaarka Dabiiciga ah ee dib loo isticmaali karo baakidhka bacda qurxinta ee Unisex ee Safarka